January 2022 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Jan 31, 2022 1
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 29-06-1443,…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida 31-01-2022.
Axmad	 Jan 31, 2022 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Isniin, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Jan 30, 2022 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 28-06-1443,…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida 30-01-2022.
Gudiga Gurmadka Abaaraha Oo Deeq ka qeybiyay Bakool.
Degmada Rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee Bakool waxaa ka billowday olole ballaaran oo raashiin qeybin ah, oo ay sameeyeen gudiga gurmadka abaaraha ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu yaraan 500 oo qoys oo ay saameysay abaarta…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Axmad	 Jan 29, 2022 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 27-06-1443,…
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida 29-01-2022.
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti, taariikhda hijriguna waxay ku beegan…